PressReader - Ilanga: 2018-11-01 - BAZOGABISA NGEZIZWE ZABO KOWENDONI
BAZOGABISA NGEZIZWE ZABO KOWENDONI
Ilanga - 2018-11-01 - Izindaba - MTHOBISI SITHOLE
ISHAYA ngonyawo olusha iNdoni Miss Cultural South Africa yalo nyaka njengoba zonke izizwe zizoqala ngokuzibonakalisa ngokwezizwe zazo.
Lokhu kuvezwe ngumsunguli weNdoni, uDkt Nomcebo Mthembu, othe zizobe zibambene phansi phezulu njengoba zonke izizwe zizobe zinamaqembu ayobe ezimele mhla ka-15 kuZibandlela (December) eNkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC), eThekwini.
IKwaZulu-Natal izobe ikhombisa ezinye izizwe ngamahubo ezintombi, indlamu, ijadu, ushameni nomshado.
Uthi inhloso yokusungula lo mncintiswano wezintombi wukugqugquzela ukuziphatha kahle kwentsha, wukugqugquzela amasiko, inhlonipho nemfundo okubalwa nokugwemeka kwezifo, ubugebengu nokukhulelwa kwentsha imbala.
Ukusungula kwakhe iNdoni ngo-2011 uthi kwamukeleke kakhulu eNingizimu Afrika ngoba ucwaningo luveza ukuthi ngisho umnotho weTheku uthuthuke ngaphezu kuka-R32 000 000 kwazise lo mcimbi wenzelwa khona.
Uthi indoni iqhakambisa kakhulu imfundo entsheni njengoba intokazi ephume phambili ihlonyuliswa ngomfundaze ka-R100 000 kanti elale isibili yemuka no-R50 000.
Utshele ILANGA ukuthi ngaphambi komcimbi omkhulu, mhla ka-9 kuzoba nesidlo santambama sokwemukela abazomela zonke izizwe, mhla ka-14 kuzoviliyelwa kusukwa eKing Dinuzulu Park kuze kuyophethwa eCity Hall khona eThekwini.
Amathikithi omcimbi omkhulu atholakala eWebtickets nasePick 'n Pay, ngo-R150.00 awezicukuthwane wu-R400.